Ntuziaka zuru ezu maka Industrylọ Ọrụ Nọọsụ na Latin America
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Ntuziaka zuru ezu maka Industrylọ Ọrụ Nọọsụ na Latin America
Akụkọ na -agbasa ozi Argentina • Akụkọ kacha ọhụrụ na Brazil • Na-agbasa News Travel • Akụkọ kacha ọhụrụ na Chile • Akụkọ na -agbasa ozi Colombia • Akụkọ gbasara Ekwedọọ • Akụkọ Guatemala • Akụkọ na -agbasa ozi Mexico • News • Akụkọ kacha ọhụrụ na Peru • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
14 min gụọ
Nọọsụ Latin America
Latin America ahụla nnukwu mmepe na mmepe n'ime afọ 50 gara aga, na-eweta ọrụ na ahịa niile na akụnụba 20 na ndị na-adabere na 12 nke mejupụtara mpaghara a dịgasị iche iche. Nọọsụ bụ otu ngalaba na-arụ ọrụ dị mkpa na ọganihu nke nlekọta ahụike n'akụkụ a nke ụwa. Midwives bụ ndị nọọsụ na-enye ụmụ nwanyị dị ime na ndị nọọsụ nlekọta na-elekọta nwanyị. Ya mere, ngalaba nke nọọsụ na midwifery nwere njikọ chiri anya yana ọtụtụ ndị ọkachamara na-ahọrọ ịghọ nọọsụ gbaara-midwife (CNM) iji nwee nhọrọ nke ịrụ ọrụ abụọ ahụ.
O di nwute na, ime nnyocha n'ime ulo oru ndi oru nlezianya nke Latin America nwere ike iduga gi onu ojoo nke akuko na ihe omumu nke na adighi uzo ma obu nkwubi okwu. N'ime ntuziaka a dị mfe, anyị ga-agabiga ụfọdụ akụkọ na nghọta kachasị akọwapụta ọnọdụ nọọsụ na midwifery dị na Latin America ugbu a:
Schoolslọ akwụkwọ dị n'ịntanetị na-aghọ ndị a ma ama maka ndị nọọsụ ọhụrụ na Midwives
Dị ka ọ pụtara ìhè site na ilele map satịlaịtị ọ bụla buputara, e nwere ọtụtụ ime ime obodo buru ibu na Latin America. Imirikiti obodo ndị a na obodo nta ndị a enweghị mahadum ọ bụla ma ọ bụ mmemme nọọsụ ọ bụla. N'ezie, n'ihe dị ka ụmụ ọhụrụ 30,000 a mụrụ na Latin America kwa ụbọchị, mkpa ọ dị mgbe nile maka ọzụzụ na agụmakwụkwọ nke midwife bụkwa isi ihe. Imirikiti ụmụ akwụkwọ ndị na-ebighi nso mahadum enweghị nhọrọ ọ bụla mana ịga ịga ihe ụlọ akwụkwọ midwifery ịntanetị ma ọ bụ usoro nọọsụ iji nweta nzere ndị dị mkpa iji bido ọrụ ha.
Enwere ihe karịrị 1200 Schoolslọ Akwụkwọ Nọọsụ na Latin America
Dị ka akụkọ sitere n'aka thetù Ahụ Ike Worldwa (WHO) bipụtara, a chọpụtawo ihe karịrị ụlọ akwụkwọ 1280 nke ndị nọọsụ na Latin America na Caribbean. Nke ahụ nwere ike iyi ka ọ dị ọtụtụ, mana mgbe ị tụlere eziokwu ahụ mpaghara a nwere ọnụ ọgụgụ mmadụ dum karịrị 630 nde mmadụ n'ozuzu ya, nke ahụ pụtara na e nwere ihe dị ka otu ụlọ akwụkwọ ndị nọọsụ na ọkara nde mmadụ. Schoolslọ akwụkwọ ndị a na-etinyekarịkarị obodo na obodo mepere emepe, yana n'ihi nke a, ọtụtụ mpaghara anaghị enwe ohere ịga ụlọ akwụkwọ mpaghara.
Ọtụtụ n'ime Mpaghara na-eche Nsogbu Nọọsụ
Ọ bụ ezie na e nwere ụfọdụ mba na Latin America nwere n'ezie ndị nọọsụ karịa ka achọrọ, ihe ka ọtụtụ na-emeso ndị na-abụghị ya - ụkọ zuru ebe niile nke a na-atụ anya na ọ ga-ewe afọ 5-10 ọzọ. Lọ akwụkwọ ndị nọọsụ e nyere aha ha dị na mbụ n'ọtụtụ ebe na-eme ka o yie ka ụmụ akwụkwọ nọ ebe ndị ahụ anaghị elele ohere ị ga-abụ nọọsụ. Ọbụna na mba ebe enyerela ụmụ amaala akwụkwọ n'efu, enwere mmefu na ihe mgbochi nke nọọsụ ma ọ bụ midwife.
Babyla ezumike nká ụmụaka bụ akụkụ nke nsogbu ahụ
Mgbe a bịara n’ịkọwapụta ihe bụ isi kpatara ụkọ nọọsụ na-aga n’ihu, ịla ezumike nká nke ọgbụgba nwa ọhụrụ nwere ike ịdị ka ọ na - emetụta ihe karịa ịkpa oke n’etiti ụmụ nwanyị. Afọ a, nke sitere na 55-75 afọ, na-anọchite akụkụ na-eto eto nke ndị nọọsụ na ndị na-eji ime na-arụ ọrụ na Latin America. Dika ndi mmadu a lara ezumike nká, a choro ndi ohuru gụsịrị akwụkwọ ka ha dochie ha. Ihe bụ nsogbu bụ, ọnụego ọzụzụ a anaghị ebi na mkpa ndị ọrụ mmadụ chọrọ n'ọtụtụ ebe. Ọzọkwa, ọbụlagodi na ịnwere ọnụ ọgụgụ nha anya nke ndị gụsịrị akwụkwọ ọhụrụ dị njikere iji jupụta akpụkpọ ụkwụ nke ụmụ ọhụrụ na-ala ezumike nká, ọ nwere ike isiri ha ike inweta ego na enweghị ahụmịhe.
Nọọsụ Migration bụ Esemokwu ọzọ
Ọtụtụ ndị nọọsụ na ụmụ nwanyị na-ele ime na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na Latin America nwere nrọ nke ịkwaga mba ndị ọzọ mepere emepe ebe ha nwere ike ị nweta ụgwọ ọnwa dị elu ma rite uru na akụnụba siri ike. Nke a bụ ebumnuche kwere nghọta ịnwe dị ka onye ọ bụla, mana n'ọtụtụ buru ibu, ọ dị njọ maka nọọsụ Latin America n'ihi na kwa afọ ọtụtụ puku ndị nọọsụ na-ahọrọ ịkwaga, na-ahapụ ọbụna oghere ndị ọzọ n'ihe banyere ụkọ mba ndị dị ka Chile na Bolivia chere ihu. N'ụzọ dị mwute, ọ nweghị ụzọ ọ bụla mba ndị a ga-esi nyere ndị ọrụ ha kacha nwee ọfụma na ahụmịhe aka ịnọ, yabụ na nke a ga-abụrịrị ihe kpatara ya.
Ikike nwoke na nwanyị na-agbaso usoro ụwa
Womenmụ nwanyị nọọsụ na-arụ ọrụ nọọsụ n'ụzọ zuru oke n'ụwa niile ma a na-ahụkwa omume a na Latin America, ebe ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị nọọsụ bụ ụmụ nwanyị. N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na Latin America bụ ite na-agbachitere ọdịbendị, ụwa enwebeghị ike ịmegharị echiche ọha na eze na-ekwu na ụmụ nwoke kwesịrị ịbụ ndị dọkịta na ụmụ nwanyị kwesịrị ịbụ ndị nọọsụ. Chụpụ na ịkwaga gabiga echiche oge ochie a ga - enyere aka ịkwụsị oke ụkọ nọọsụ zuru ụwa ọnụ.
Igodo Nursing Key maka Peru
N'dabara adaba, anyị ga-amalite nyocha anyị na stats dị mkpa maka mba Latin America ọ bụla nwere nkọwa nke ụlọ ọrụ nọọsụ nke Peru. Ọtụtụ mba na-eche ụkọ nọọsụ ihu, mana Peru nwere ike n'ezie nwee ike mejupụta oghere dị na ngalaba a site na mbido afọ 2020. Ka ọ na-erule oge ahụ, a ga-arụ ọrụ atụmatụ 66% nke ndị midwife na 74% nke ndị nọọsụ. Enwere ihe dị ka ndị ọrụ ahụike 23 maka mmadụ 10,000, na-eme ka Peru bụrụ otu n'ime mba ndị Latin America na-arụ ọrụ nke ọma na ngalaba nlekọta ahụ ike. Agbanyeghị, ọ nwere ike isiri ọtụtụ ndị nọọsụ na ndị ọzọ na-agụsị nwa na-agụsị akwụkwọ na Peru ike inweta ego n’ime afọ abụọ mbụ nke ọrụ ha.
Igodo ndị nọọsụ dị mkpa maka Colombia
Na Colombia, enwere naanị nọọsụ isii n’ime mmadụ 6 ọ bụla. N’agbanyeghi onu ogugu a, onu ogugu ndu nke obodo a bu ihe dika 10,000. Site na onu ogugu ndi mmadu ruru ihe dika 79 nde, anyi puru ihu na enwere ugbua ihe ruru 50 no noo ndi oru na Columbia. Ọnụ ego ụgwọ maka nọọsụ na Colombia bụ ihe dịka 30,000 COP, nke na-arụ ọrụ ihe ruru 29,000,000 COP kwa awa. Iji mee ka nke ahụ pụta ìhè, nke ahụ bụ ihe dịka $ 14,000 USD kwa elekere. N'ezie, na ụgwọ ọrụ ndị dị ka ndị ahụ, ọ bụ ihe ezi uche dị na ndị nọọsụ Colombia ga-enwe nrọ ịkwaga mba ebe ụgwọ ọrụ awa bụ 4x na ego ahụ.
Ọnụọgụ ndị nọọsụ Key maka Brazil
Brazil nwere ihe dị ka ndị nọọsụ 4 n'ime ndị bi na 10,000 - ọnụ ọgụgụ dị ala maka metric a na nke na-egosi ụkọ doro anya. Site na ngụkọta nke ihe dịka nde 209, nke ahụ pụtara na e nwere ihe dị ka ndị nọọsụ 80,000 na-arụ ọrụ na Brazil ugbu a. Agbanyeghị, ebe obodo ahụ nwere nnukwu ala nwere ọtụtụ ime obodo, enwere ọtụtụ ime obodo na Brazil ebe ọ na-esiri ike ma ọ bụ agaghị ekwe omume ịnweta nlekọta ahụike ọkachamara ma ọ bụ midwifery. Ọbụna na obodo ndị bụ isi dịka Rio de Janeiro enweela ihe ndị mere ebe minista ahụike mba ahụ chọrọ ịkpọ ndị ọrụ ahụike na mberede n'ihi nsogbu nsogbu ego nke hapụrụ ụlọ ọgwụ na ụlọ ọgwụ obere oge.
Igodo Nursing Key nke Argentina
Ihe dị ka nọọsụ 4 n’ime mmadụ 1,000 ọ bụla, etinyela Argentina na ndepụta nke mba 30 kacha elu nwere ụkọ ndị nọọsụ kacha njọ. N’obodo nke ihe karịrị nde mmadụ 44, e nwere nanị ihe dị ka ndị nọọsụ 18,000. Ọ bụ ihe na-adọrọ mmasị ịmara na amaara mba a na njupụta nke ndị dibia, yabụ enwere ụkọ na-enweghị atụ na ụkọ ebe ahụ na ụlọ ọgwụ nwere ọtụtụ ndị dọkịta zuru oke mana ezughi ndị nọọsụ. N'ụzọ na-akpali mmasị, ụkọ nọọsụ nke Argentina dị ihe dị ka okpukpu abụọ ka ọ dị afọ iri abụọ gara aga, ọtụtụ ndị nyocha na-enyo enyo na ihe kpatara njọ bụ mbata na ọpụpụ na mba ndị ọzọ ebe nka na-akwụ ụgwọ dị elu.
Ọnụọgụ ndị nọọsụ Key maka Bolivia
Bolivia nwere ngụkọta ọnụ ọgụgụ nke ihe dịka nde 11, enwere ihe dịka nọọsụ 1 n'ime ndị bi na 1,000. Ọ pụtara na e nwere ihe dịka ndị nọọsụ 1100 na mba ahụ dum. Nke a bụ otu n'ime ụnwụ nọọsụ kacha njọ na Latin America, eziokwu abụghị ihe ijuanya mgbe ị matara na ọ dịla anya Bolivia bụ otu n'ime mba ndị kasị daa ogbenye n'ụwa. Nsogbu akụ na ụba nke mpaghara a mere ka ọ bụrụ ebe na-adịghị mma maka ndị nọọsụ na ụmụ nwanyị na-eji ime n'ihi na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mba ọ bụla na-akwụkwu ụgwọ maka otu ọrụ ahụ.
Ọnụọgụ ndị nọọsụ Key maka Chile
O juru ọtụtụ ndị mmadụ anya ịchọpụta na ụkọ nọọsụ na Chile, dịka a maara nke ọma na gọọmentị mere ka ụmụ amaala niile nwee agụmakwụkwọ n'efu. Agbanyeghị, site n'ọtụtụ ohere ọrụ a ịhọrọ, ọrụ nọọsụ na midwifery abụrụla ọrụ na-adịghị mma. Obodo a nwere onu ogugu kariri 18,000,000 ma enwere nani ndi nosi 0.145 n’ime ndi bi n’ime 1000. Nke ahụ bụ otu n'ime ọnụ ọgụgụ kacha nta nke ndị nọọsụ nọ n'ụwa, ma belụsọ na emere ọrụ ka ọ bụrụ nhọrọ na-adọrọ adọrọ maka ụmụ akwụkwọ na-atụ anya ya, o yighị ka a ga-edozi ụkọ n'oge ọ bụla.
Nọọsụ Nọọsụ maka Ecuador
Nsogbu ndị nọọsụ na Ecuador adịghị njọ dị ka ọ dị na mba ndị ọzọ Latin America, nwere ihe dị ka ndị nọọsụ 2 n'ime ndị bi na 1000. Mba ahụ hụrụ nnukwu ọnụọgụ nke ndị nọọsụ ọhụụ pụtara n'etiti afọ 1998 na 2008, na-ahụ mmụba site na 5 / 10,000 ruo ihe karịrị 18 / 10,000 n'oge ahụ. Agbanyeghị, Ecuador nwere ọnụ ọgụgụ dị elu nke ndị gụsịrị akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị ma ọ bụ naanị pasent ole na ole nke ndị bi na ya ga-aga mahadum, yabụ o yighị ka ndị nọọsụ ga-aga n'ihu na-aga n'ihu karịa ogo nke ụmụ ọhụrụ na-ala ezumike nká nke ga-ahapụ ndị ọrụ ọrụ n'etiti 2020-2025.
Nọọsụ nọọsụ maka Guatemala
Guatemala bụ ógbè ọzọ dị na Latin America nke nwere ọnụ ọgụgụ ndị nọọsụ pere mpe nke isi n'isi naanị mmadụ 0.864 n'ime mmadụ 1,000 bi na ya. Site na onu ogugu kariri 14,000,000 na onodu aku na uba nke nwere oke onodu aku na uba n’etiti umu aka ya ndi dara ogbenye na ndi ogaranya, Guatemala choro ndi noosi ohuru na ndi ozo. Agbanyeghị na inwe nnukwu akụ na ụba na Central America, nke a bụ mba ebe ihe karịrị 60% nke ndị mmadụ bi na ịda ogbenye. Ọ bụ ezie na agụmakwụkwọ bụ n'efu na mba a, ihe ndị achọrọ iji gụchaa ụlọ akwụkwọ ka dị oke ọnụ maka nwa amaala, na -emepụta ihe mgbochi ọzọ maka ụmụ akwụkwọ ahụike.
Nọọsụ Nọọsụ Maka Mexico
Ọ ga-abụ ihe ezi uche dị na ya iji kpuchie ụlọ ọrụ ndị nọọsụ na Latin America na-ekwughị ọnọdụ dị ugbu a na Mexico. Gọọmentị mba ahụ kwuru n’oge na-adịbeghị anya na achọrọ ndị ọzọ nọọsụ 255,000 ọzọ iji mezuo ụkpụrụ nduzi nke Healthtù Ahụ Ike ofwa nke inwe ndị nọọsụ 6 n’ime ndị bi na 100,000. N'oge ahụ, Mexico nwere nanị nọọsụ 4 n'ime 100,000 mmadụ ọ bụla, na ngụkọta nke ihe dị ka ọkara ndị nọọsụ na-elekọta ndị bi na ihe karịrị nde 129. Ebe ndị ụkọ nọọsụ kacha njọ na Mexico gụnyere Veracruz, Michoacan, Queratero, na Puebla.
Nọọsụ nọọsụ maka Caribbean
N'ikpeazụ, ebe ọ bụ na a na-achịkọta Caribbean na Latin America n'otu mpaghara ahụ dum, ọ bụ naanị ihe ziri ezi iji kwurịta ọnụ ọgụgụ mpaghara a. E nwere ihe dịka ndị nọọsụ 1.25 n’ime otu puku ndị bi na Caribbean na-asụ Bekee. Nke ahụ pụtara ihe dịka ndị nọọsụ 1,000 na-arụ ọrụ na mpaghara a. Efi afe 8,000 reba no, nhomatintim mfonini a ɛwɔ Caribbean supɔw no so bɛyɛ 2006. Site na 3,300, a na-atụ anya na ọnụ ọgụgụ ahụ ruru 2025. Kwa afọ 10,000, ihe dịka ndị nọọsụ 5 na-ahapụ Caribbean ịkwaga mba ndị akwụ ụgwọ dị elu. Ihe ndekọ a gosipụtara nsogbu nkịtị ọtụtụ mba Latin America na - enwe - enweghị ike igbochi ndị ọrụ ahụike ha kachasị baa uru ịkwaga.
Ihe kpatara ụmụ akwụkwọ na-ahọrọ Mmemme ịntanetị na ụlọ akwụkwọ na-adịghị n'ịntanetị
Site n'ịgụ ọnụ ọgụgụ dị elu na nghọta, ị ga-amalite ịhụ foto doro anya nke mpaghara ebe ịchụso ọrụ dịka nọọsụ anaghị adịkarị ka nhọrọ ọrụ bara uru. Ọtụtụ ụmụ akwụkwọ na-ahọrọ ịntanetị maka na ọ na-enye ha ikike ka ndị mahadum mba ọzọ nabata ha. A na-ahọrọkarị nzere nke ụlọ akwụkwọ ndị dabere na mba ndị mepere emepe.
Ugo mmụta sitere na mahadum US ma ọ bụ nke Europe nwere ike ịdị mma karịa na ngwa ọrụ n'ọdịnihu karịa ka nọọsụ nọọsụ nwetara site na obere mahadum dị na Central ma ọ bụ South America. Nanị ihe a na-akpali ụmụ akwụkwọ nwere oke mmụọ ịchụso agụmakwụkwọ mba ọzọ ma ọ bụ site na ụlọ akwụkwọ mmụta mmụta ntanetị. Na mmechi, mmemme mmụta ịntanetị dị ka ọ na - enye ugwu karịa ụlọ akwụkwọ Latin America na - anọghị n'ịntanetị, nke na - atụgharịkwu uche na mwepụ na ohere ọganiihu ọrụ.